ခရီးသည်(၁၀၇)ဦး လိုက်ပါလာတဲ့ ပါကစ္စတန် လေယာဉ်လူနေအိမ်တွေထဲ ပျက်ကျမှု လေယာဉ် Accident ( Video မှတ်တမ်း ) - UpdateNew
ခရီးသည် ၉၉ ယောက် လေယာဉ်သား ၈ ဦး စုစုပေါင်း ၁၀၇ ဦး လိုက်ပါလာတဲ့ ပါကစ္စတန်လေကြောင်းလိုင်း PIA က A320 လေယာဉ်တစီး ကရာချိ လေဆိပ်ဆင်းသက်ရာမှာ ဘီးချစနစ် ချို့ယွင်းမှု့တခုကြောင့် ပြန်တက်ခဲ့ပြီး
နောက်တကြိမ် ဆင်းသက်ဖို့ ချဉ်းကပ်စဉ်မှာ လူနေအိမ်တွေထဲပျက်ကျခဲ့ပြီး ပေါက်ကွဲမီးလောင် ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်း ..ခရီးသည် ၉၀ လေယာဉ်သား ၈ ဦးလို့ဆိုပါတယ် ..အတည်ပြုနေကြဆဲပါ။
လေယာဉ်ဟာ ဒုတိယအကြိမ်ချဉ်းကပ်စဉ်မှာ အင်ဂျင်နှစ်လုံးသေသွားလို့ ပိုင်းလော့တွေကအရေးပေါ် ” မေဒေး မေဒေး ” ဆိုတာကြိမ်ဖန်များစွာခေါ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် လေယာဉ်ကလဲ ပြေးလမ်းမရောက်ခင်အမြင့်ပေများစွာ နိမ့်သွားပြီး ပြေးလမ်းမရောက်ခင် အိမ်တွေထဲထိုးကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
A PIA Pakistan International Airlines A320-200, registration AP-BLD performing flight PK-8303 from Lahore to Karachi (Pakistan) with 99 passengers and 8 crew, had aborted the approach to Karachi due to problems with extension of the landing gear and performedago around.
The aircraft lost height and impactedaresidential area called Model Colony on second final approach east of the aerodrome (presumably while on final approach to runway 25L) and burst into flames.
Source – Aviation Herald /TTW
ခရီးသညျ(၁၀၇)ဦး လိုကျပါလာတဲ့ ပါကစ်စတနျ လယောဉျလူနအေိမျတှထေဲ ပကျြကမြှု လယောဉျ Accident ( Video မှတျတမျး )
ခရီးသညျ ၉၉ ယောကျ လယောဉျသား ၈ ဦး စုစုပေါငျး ၁၀၇ ဦး လိုကျပါလာတဲ့ ပါကစ်စတနျလကွေောငျးလိုငျး PIA က A320 လယောဉျတစီး ကရာခြိ လဆေိပျဆငျးသကျရာမှာ ဘီးခစြနဈ ခြို့ယှငျးမှု့တခုကွောငျ့ ပွနျတကျခဲ့ပွီး
နောကျတကွိမျ ဆငျးသကျဖို့ ခဉျြးကပျစဉျမှာ လူနအေိမျတှထေဲပကျြကခြဲ့ပွီး ပေါကျကှဲမီးလောငျ ခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။နောကျဆကျတှဲသတငျး ..ခရီးသညျ ၉၀ လယောဉျသား ၈ ဦးလို့ဆိုပါတယျ ..အတညျပွုနကွေဆဲပါ။
လယောဉျဟာ ဒုတိယအကွိမျခဉျြးကပျစဉျမှာ အငျဂငျြနှဈလုံးသသှေားလို့ ပိုငျးလော့တှကေအရေးပျေါ ” မဒေေး မဒေေး ” ဆိုတာကွိမျဖနျမြားစှာချေါခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ လယောဉျကလဲ ပွေးလမျးမရောကျခငျအမွငျ့ပမြေားစှာ နိမျ့သှားပွီး ပွေးလမျးမရောကျခငျ အိမျတှထေဲထိုးကခြဲ့တာဖွဈပါတယျ ။